Apho unokufumana khona iimephu kwifomathi yevektha-iGeofumadas
NgoJuni, 2009 Iiphotography, Ukulanda
Ukufumana iimephu kwifomathi yelizwe elithile kunokuba yinto engxamisekileyo kuninzi. Kufundwa iqonga Gabriel Ortiz Ndifumene le nxu lumano enomdla kuba ayinikezeli kuphela iimephu kwiifom .shp, kodwa i-kml, igridi kunye ne-mdb.
Ku malunga gata, inkonzo ephakanyiswe yi-International Rice Research Institute, ikhululekile kwaye kubonakala ngathi ivela kwihlabathi lonke.
Iimaphu zingasetwa yilizwe,
Lo mzekelo, kwimeko yaseSpeyin, ukuba sifuna ukujonga iimephu zecandelo lolawulo kwi-format ye-kml umphumo kukuba:
Imephu kwinqanaba lelizwe
Ukwahlula okuQalayo (iindawo ezizimeleyo)
Icandelo lesibini (amaPhondo)
Ukwahlula okwesithathu (iinqununu)
Icandelo lesine (oomasipala)
Yinto elula leyo, ukukhuphela nje. Nangona kwimeko ye-. kwaye kwimeko ye-geodatabase i-.mdb iqulethe udidi lwenqaku.
Lo ngumzekelo waseMexico nasePeru, ukunika imizekelo emibini:
Idatha ekhoyo iquka:
Ifayile yefayile, .kmz (yeGoogle Earth) kunye .mdb njenge geodatabase
Hydrology (amanzi angaphakathi)
Igridi ngokusombulula imizuzwana ye-30
Ukuphakama, i-dataset ye-SRTM30
Idatha yemozulu yenyanga
Kuza kufuneka uqinisekise inqanaba ngokuchaneka welizwe lakho, kwimeko data yeraster, ubukhulu imizuzwana pixel 30 kufutshane Ecuador edlula 0.8 square kilometre, kodwa ekwizibanzi enambuzelayo poleward, ubukhulu encinci.
Enye indlela yokufumana imephu D-Maps.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iimaphu xa ufuna iindiza
Post Next I-Webinars, iya kwenza uBentley?Okulandelayo »
4 Iimpendulo "Apho unokufumana khona iimephu kwifomathi yevektha"
Ngaba idatha yokusetyenziswa loluntu? Ngaba iinkampani zingayisebenzisa isitsho ukuba bayifumana njani?
Ulungelelwaniso lweeKhothography zaseMexico 2012 SHP kunye ne-TAB
Molo, abo bafuna cartography ukuhlelwa lonyulo Mexico inqanaba kunyaka 2012 ungatsalela nam nge email, ngaphezu 40 Ingaphandle, ziphakathi abo ithi, oomasipala okanye kwamagunya, izithili yonyulo federal, amacandelo onyulo , iindawo, izikolo, izibhedlele, amaziko zokuthenga, izikhululo zeenqwelo-moya, iindlela, ama-apile kunye nangaphezulu. Ulawulo kwifomathi imilo ngenxa ArcView okanye ArcGIS MapInfo tab.
Ngokuqinisekileyo, idatha inomlinganiselo omncinci, kodwa iyanceda ngokubandakanya ii-IDE zengingqi.
NDISELE ndiliphengulule iphepha, ngokubanzi lisetyenziselwa ukusetyenziswa kwam kodwa lilula kwaye liluncedo kwimibuzo yamanye amazwe ...}